RIP, Buck Henry: Qiimo | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Warfaafinta Injineerka Warbaahinta%
Bogga ugu weyn » Featured » RIP, Buck Henry: Mahadcelin
RIP, Buck Henry: Mahadcelin
Buck Henry (isha: Archive of Telefishanka Mareykanka)
Warshadaha telefishanka Mareykanka waxaa lumiyey mid ka mid ah qorayaasha ugu kartida iyo hufnaanta badan. Arbacadan, Buck Henry, qoraa karti badan, soo-saare, agaasime, iyo jilaa ayaa dhintay 89 jir.
Henry ayaa caan ku ah kaqeyb qaadashadiida filimaanta, gaar ahaan shaqadiisa loo magacaabay Oscar ee ku saabsan Mike Nichols ' Graduate The (1967), kaas oo uu Henry la wadaagayay shaashadda Calder Willingham, iyo Jannada ayaa sugi kara (1978), oo ah soocelintii majaajillada majaajillada ah ee 1941 Halkan waxaa ku jira Mr. Jordan, kaas oo Henry uu gacansaar la yeeshay xiddigga Warren Beatty sidoo kale door wanaagsan ka ciyaaray.
Waxay ahayd, si kastaba ha noqotee, qoraalkii Henry ee telefishanka halkaas oo uu markii ugu horreysay isku muujiyey inuu yahay hibo weyn, horumarkiisa shaashadda yar ee ugu caansan waa wada-abuure (Mel Brooks) Hel Smart, sawir gacmeedyo jilicsan oo filim sirqool ah oo soo raacay ka dib sawirradii James Bond ee hore. Marka uu yahay jilaa TV, waxaa laga yaabaa in si fiican loogu xasuusto muuqaalkiisa mid ka mid ah Saturday Night LiveMartida martida joogtada ah.
Wuxuu ku dhashay Buck Henry Zuckerman, waa wiilkii guud ee ciidanka cirka wuxuuna ahaa jilaa shaashad aamusnaan leh, Henry wuxuu heley filimkiisii ​​ugu horreeyay TV-ga 1961-kii. Showgii New Steve Allen Show, taxane majaajillo-kala duwan. Waxa kale oo uu ka soo muuqday muuqaalkiisii ​​ugu horreeyay ee kaamirada muuqaalka ah ee muuqaalka ah oo uu ka ciyaaray meel saddex meelood meel ka mid ah koox heeso dad ah oo loo yaqaan Beta Alpha Delta Trio. (Labada sedex meelood laba meelood waxay ahaayeen Tim Conway iyo Jim Nabors. Sawirka waxaa laga qaatay Kingston Trio.)
Qosolkiisa TV-yada ee xigay wuxuu ahaa Bandhigga Gerry Moore (1963-64) iyo Taasi waxay ahayd Toddobaadka Taasi (1964-65). Dambe wuxuu ahaa nooc Mareykan ah oo taxane caan ka ah Ingiriiska isla isla magacaas oo ku takhasusay shaybaarka shaydaanku ku saabsan yahay arrimaha hadda lagu sameeyo qaab showga shabakadda ah, saadaalin ka mid ah nooca aan ixtiraam lahayn, kaftanka anti-Establishment ee isna sidoo kale ciyaari lahaa qayb ka mid ah abuurka Hel Smart, Henry shaqadii xigta ee qorista.
Iyada oo uu kormeerayo soosaaraha fulinta Leonard Stern, Henry iyo Mel Brooks waxay u qoreen qoraalka tijaabada Hel Smart sidii gaadiid loogu talagalay majaajilistaha wejiga hore ee majaajillada Tom Poston (laga yaabee in sida ugu wanaagsan loogu xasuusto maanta sidii handyman George Utley ee sitos caanka ah. Newhart). Laakiin, iyada oo loo marayo duruufo taxane ah, majaajiliistaha caanka ah ee Don Adams ayaa isu soo taagay sidii wakiil qarsoodi ah oo qarsoodi ah Maxwell Smart. In a Wareysiga 2015 ee KDOC-TV in Los Angeles, Henry wuxuu xasuustaa dhacdooyinkii horseeday Hel Smartabuurka.
“Danny Melnick wuxuu maamuley shirkadda wax soo saarka ee shirkadda [David] Susskind, maalin maalmaha ka mid ahna waa uu isoo wacay. Wuxuu horeyba ugu yeeray Mel, iyo [tusaale] qurux badan oo ah 'khadka hoose,' wuxuu igu yidhi, ' Miyaad ogaatay labada hits ee waa weyn inay ku meeraysanayaan adduunka dacaladiisa ganacsiga filimku waa [James] Bond iyo [Isbatooraha] Clouseau? Hel sawirka? ' Haa, waan helay sawirka. Waxaa lagu qoray qandaraas ABC, isla markii ABC ay heshay, waxay codsadeen in dib loo qoro, ka dibna waxay codsadeen wax intaa ka sii badan, ka dibna waxay dhaheen, 'Kuma soo rogi karno alaabtan oo kale qoys ka qadeeya guryahooda . ' Waxaan u maleynayaa inay u maleeyeen inay tahay nooc ka soo horjeedda Mareykanka…
"Qof - kani waa halyeeygii - wuxuu fuuli jiray jaranjarooyinka Hoteelka Beverly Hills, isagoo sita qoraalkii tijaabada ahaa, Grant Tinker [oo markaa ahaa madaxa barnaamijka West Coast ee NBC] ayaa jaranjarada maraya, wuxuuna yiri, 'Whadaya ? ' Waxaan duuliyahaan u helnay nin qosol badan. Grant Tinker ayaa qaatay oo yiri, 'Haye, waxaan raadineynaa bandhig' Don Adams, 'waana wax aan caadi aheyn maxaa yeelay qof walba wuxuu u maleynayaa in taamku horay u dhacay. Barbara [Feldon, Wakiilka 99] way fududayd; Waxay ku soo wareegi jirtay telefishanka, markaa waan garanay iyada, waanan ogaa inay runti fiicnayd. Waxaan jeclaanay Ed Platt [Caaqilka], jilaa dabeecad cajaa'ib leh, wuxuuna ahaa ruux macaan oo dabacsan…
“Maxwell Smart waa kii Mel, 99 anigaa leh, Cone of Silence anigaa iska leh — weligeed ma shaqeyn; Waxay ahayd guul marin habaabin — taleefanka kabaha ayaa ah Mel, sheekada fooramka [taxanaha dhibcaha furitaanka iyadoo Max uu marayo waddo dheer iyada oo loo marayo albaabbo farsamo] waa gebi ahaanba Leonard Stern - waa laga yaabaa, waxaan u maleynayaa, mid ka mid ah farsamooyinka ugu waaweyn aalado waligood loo isticmaali jiray majaajillada telefishanka. ”
Henry wuu sii joogay Hel SmartTifatiraha sheekada, isaga iyo Stern waxay ku guuleysteen Emmy wada-qoristii qaybtii labaad ee "Markab Basaasiin."
Henry wuxuu isku dayey inuu nuqul ka sameeyo guushii Hel Smart adoo abuuraya oo soo saaraya labo fadhi oo satiric ah oo dheeri ah, laakiin nasiib xumo midkoodna kama qabin daawadayaasha TV-ga. Midka koowaad Kabtan Nice (1967), xiddigle William Daniels doorka cinwaanka, waxaa loola jeeday inuu sameeyo majaajillada majaajilistaha waxa Hel Smart ku sameeyey nooca basaasnimada. Kaliya waxay qaadatay xilli badhkeed (13 qaybood). Henry's sitcom soo socda Quark (1978), parody ah Star ugu celiso, xitaa ka sii xumaaday; waxay qaadatay kaliya toddobo marxaladood.
ka baxsan Hel Smart, Amaahda TV-ga ugu caansan ee Henry ayaa soo muuqatay 10 jeer oo martida martida loo ahaa Saturday Night Live intii lagu guda jiray taxanaha 'shantii xilli ciyaareed ee ugu horreysay (1975-80), taas oo taageerayaal badani weli tixgeliyaan sannadihii ugu qosolka badnaa. Dhagaystayaasha filimku horeyba way uga warqabeen Henry sababo la xiriira qaybtiisa taageerada gaaban ee filimada sida Mike Nichols ' Graduate The (1967) iyo 22 qabsado (1970), iyo sidoo kale doorkiisa kaliya ee kaliya ee hogaaminta Milos Forman Qaadashada (1971). Waxay ahaayeen kuwa SNL martida martida martida ah, si kastaba ha noqotee, ayaa ka dhiga Henry weji caan ah oo daawadayaasha telefishanka ah. Hadalkiisii ​​qallafsanaa, ee xiisaha badnaa, wuxuu cadeeyay inuu noqon karo qof qosol leh oo jilaa ah maadaama uu qoraa ahaa. Riwaayadihiisa SNL wuxuu sidoo kale ku xoojiyay dhibcaha uu ka qaatay dhaqdhaqaaqa kaftanka kahortaga dhaqashada xoolaha, taas oo inta badan uga mahadcelisa Masraxa Firesign iyo National Lampoon, ku faafay sidii dab ololaya oo dhagaystayaasha dhallin-yarada Mareykanka ah horaantii 1970-meeyadii.
Saddexaad kii Henry SNL muuqaalada waxaa kasoo muuqday mid ka mid ah musiibooyin xusuus mudan taariikhda telefishanka tooska ah. Markii uu martigelinayey, Henry wuxuu badiyaa sameeyey sawir ka soo horjeedka dabeecadda samurai ee John Belushi. (Kaftanka wuxuu ahaa in Henry had iyo jeer uu u jawaabo Belushi-ga jibbaanka dhawaqa u eg sida uu erey kasta u fahmay.) , oo ku calaacalaya in xafiiska uusan daaqad u heysan inuu is dilo isagoo ka boodaya. Belushi isaga ayaa ku qasbay isaga oo seef ku gooya daloolka darbiga xafiiska, isaga oo si kama 'ah ugu dhaaranaya Henry foodda hore ee hawsha. Sidii aysan taasi xumaan ugu filneyn, daaqada daaqada aan hagaagsaneyn ayaa burburtay markii Henry uu sii fuulayay, lugtana sidoo kale ka furayay Weligiisba xirfadlaha, Henry wuxuu kusii waday barnaamijka intiisa kale sidii isagoon waxba dhicin, inkasta oo faashad ay kuxirantahay baarkiisa.
Sawir gacmeedku wuxuu soo muuqday goor hore markii la daawanayay, markii Chevy Chase uu sameeyay qaybta "Cusboonaysiinta Usbuuca", wuxuu ku dhajiyay warka ku saabsan dhaawacyada Henry. Dhamaadka baahinta, inta kale ee jilaayaasha ah iyo muusikiisteyaasha oo dhami waxay ku ciyaarayeen faashado madaxooda iyagoo si wada jir ah u wada wicitaankii daahyada iyo dhibcaha dhammaadka.
Ku darsigii ugu dambeeyay ee Henry ee taxanaha majaajillada TV-ga wuxuu yimid 1984 markii uu u saxiixay qoraa ahaan iyo xubin ka mid ah Showga Cusub, taas oo ahayd SNL soo saare Lorne Michaels 'isku day uu ku abuurayo sheeko xarago, taxane kale oo majaajilo ah oo ka baxsan dhaqanka Saturday Night Live, oo ay kujiraan fanaaniin horay u jilay SNL iyo SCTV. In kasta oo ay ahayd taxane dhammaystiran shaqaalaysiin, Showga Cusub, alas, ma uusan raacin wax ka fiican sidii hore Kabtan Nice iyo Quark, waxayna qaadatay sagaal dhacdo.
Illaa sanadihii ugu dambeeyay, Henry wuxuu sii waday inuu muujiyo martida dhowr taxane oo TV ah. Mid ka mid ah doorarka ugu xiisaha badan ee uu weligiis ciyaaray wuxuu ahaa dhacdo si gaar ah u xun oo 1992 ah oo ku saabsan cudurka argagaxa Warkii ka Crypt ah loo yaqaan "Nasashada Quruxda." Henry wuxuu ciyaaray MC tartan qurux ah oo ay ku guuleysatay atariisho caan ah (Mimi Rogers), oo barata goor dambe in abaalmarinta la galiyo, autopsied, oo lagu soo bandhigo goobta baaritaanka dhimashada. Henry sidoo kale wuxuu ka soo muuqday barnaamijyada TV-ga sida Dardaaran & Nimco, Kuleyl Cleveland, Sharciga & Amarka: Qaybta Dhibbanayaasha Gaarka ah, Franklin & Bash, Iyo 30 Rock (sida Tina Fey aabihiis).
Nabad ku naso, Buck Henry. Waxaad si weyn u lumi doontaa, gaar ahaan taageerayaasha majaajillada ah ee Baby Boomer.
Qoraa at Broadcast Beat
Doug Krentzlin waa jilaa, qoraa, iyo taariikhyahan filim & TV ah oo ku nool Silver Spring, MD oo wata bisadiisa Panther iyo Miss Kitty.
Doug Krentzlin (arki dhan)
2020 NAB Show Falanqeynta Pavilions: Xayeysiinta Xayeysiinta Sare - February 7, 2020
2020 NAB Show Falanqeynta Dhibbanaha: Dhisidda Khibradda Dulmiga - February 6, 2020
2020 NAB Show Falanqeyn Bixin ah: Iskuxirka Media | IP Pavilion - January 31, 2020
Buck Henry (Ilo: Archive of Telefishanka Mareykanka) Warshadaha telefishanka Mareykanka ayaa lumiyay mid kamid ah qorayaashiisii ​​ugu kartida iyo xariifnimada badnaa. Arbacadan, Buck Henry, oo ahaa qoraa karti badan, soo saare, agaasime, iyo jilaa ayaa dhintey isagoo 89 jir ah. Henry wuxuu caan ku ahaa kaalintiisa dhanka sawirada, gaar ahaan shaqadiisa Oscar-u magacaabay ee ku saabsan Mike Nichols 'The Graduate (1967) ), oo Henry uu wada qoray filimka 'Calder Willingham', iyo 'Heaven Can Wait' (1978), oo ah dib u habeyntii 1941-kii khiyaaliga-qadiimiga ahaa ee halkan ka soo yeeray Mr. door taageero ah. Waxay ahayd, si kastaba ha ahaatee, Henry's…
Dib u eegida Guud
User Rating: 4.6 ( 1 codadka)
2015 hoos bitrate Broadcast Engineer Broadcast Engineering FOR-A Graham Chapman Prmoted toEditor H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC immersive isovideo JCT-VC dhimista buuqa Waran & Fallaaro TV Technology UHD / 4K / HD Ultra HD Forum Nidaamyada kala duwan viarte Video Engineer Warsaw 2020-01-10
Previous: Engineer Tayada
Next: Soosaar Post, Booska Internation Trans Trans Internation
Ku saabsan Doug Krentzlin